Jiwan saili – Page 16 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
Category: Jiwan saili
बलात्कारीको बयान : १२ वर्षमा ६ सय बढी बलात्कार
एजेन्सी । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली युवतीहरुका लागि जोखिमपूर्ण सहरको रुपमा रहँदै आएको छ । दिल्लीमा हुने पटक पटकका बलात्कारका घटनाले विश्वको ध्यान खिच्ने गरिरहेका बेला एक बलात्कारी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका आरोपी लामो सयमदेखि यसप्रकारको आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । प्रहरीले पूर्वी दिल्लीको न्यु अशोक नगर इलाकामा स्कुले किशोरीमाथि पटक […]
Posted in: International News, Jiwan saili
यसकारण चिसो मौसममा बढी हुन्छ मान्छेलाई हृदयघात
काठमाडौं । चिसोको समयमा मानिसमा ज्यादा हृदयघातको समस्या हुन्छ । खासमा तापमानमा आउने गिरावट यसको मूल कारण हो । चिसोको मौसममा शरीरको तापक्रममा गिरावट आउनुका साथै भिटामिन डीको मात्रामा कमी र रगतमा आउने बाक्लोपनाले हृदयरोगको जोखिम बढाउँछ । चिसोका क्रममा तापमानमा अचानक गिरावट, चिसो हावा र वर्षाले शरीरको तापमानमा कमी ल्याउछ । यसको कारण रक्तचापमा […]
Posted in: Jiwan saili
थाहा पाउनुहोस् थाहै नपाई शरीरको तौल घटाउने घरेलु तरिका
काठमाडौं । हरियो मेथीको सब्जी र मेथी मिसाइएको परौठा स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदायुक्त मानिन्छ । त्यही मेथीका दाना पनि केही बिरामका लागि अचुक औषधि हो । यो तौल कम गर्ने, ब्लड प्रेसरको नियन्त्रण गर्न तथा डाइभिटिजलाई भगाउन पनि फाइदाजनक छ । जसले धेरै भोक लगाउछ, त्यो कुरा खाएमा पटक पटक खाने आदत समेत कम हुन्छ […]
यस्ता छन् बिहानै खाली खुट्टा चौरमा हिड्नुका फाइदा
काठमाडौं । बिहानको समयमा हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर, बिहानीको समयमा हरियो घाँसमा नांगो खुट्टाले हिड्नु धेरै फाइदाजनक हुन्छ । बिहानको समयमा नांगो खुट्टाले घाँस भएको चौरमा हिड्दा स्वास्थ्यका लागि हुने फाइदा यसप्रकार छन् । १. तपाई जति समय र जति धेरै हरियाली भएको स्थानमा बस्नुहुन्छ, स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ र तनाब पनि […]
Posted in: Jiwan saili, Rochak
मोटोपनाले हैरानीमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय
काठमाडौं । व्यस्त जीवनशैली, अस्वस्थकर भोजन, शारीरिक निष्क्रियताका कारण मोटोपनकामे समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । मोटोपना यस्तो अवस्था हो, जसमा शरीरको चिल्लो पदार्थ आवश्यकता भन्दा बढी हुन्छ । यसले डाइभिटिज, स्ट्रोक्स, हृदयघात र क्यान्सरजस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या बढेर जान्छन् । विज्ञहरु आवश्यकता भन्दा बढी तौल बढ्नबाट रोक्नका लागि व्यस्त जीवनशैलीका बाबजुद विहान व्यायाम गर्न […]
सन्तानका लागि अस्पताल पुगेकामाथि आयो अर्कै बित्यास
आम्सटर्डम । नेदरल्याण्डमा एक आईभीएफ सेन्टरले उपचारका लागि आएका २६ जना महिला अर्कै पुरुषको शुक्राणुले गर्भवती भएको हुनसक्ने जनाएको छ । युट्रेच युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरले सन् २०१५ देखि नोभेम्बर २०१६ को बीचमा भएको प्रक्रियात्मक गडबढीका कारण यस्तो भएको जनाएको छ । सेन्टरमा आएका २६ दम्तत्तिले उपचार गराएकोमा आधाभन्दा बढी जोडीमा गर्भधारण भएको र कतिपयको बच्चा […]
Posted in: Jiwan saili, Technology
यसकारण दिइयो १०१ वर्षीय वृद्धलाई १३ वर्ष जेल सजाय
एजेन्सी । बेलायतमा एक १०१ वर्षीय वृद्धलाई बालबालिकामाथि यौन दुराचार गरेको अभियोगमा १३ वर्षको जेल सयाज सुनाइएको छ । उनीमाथि ३० बालबालिकामाथि यौन दुराचार गरको अभियोग प्रमाणित भएपछि यस्तो सजाय सुनाइएको हो । इर्डिङटन, वर्गिङघमका राल्फ क्लार्कलाई बाल यौन दुराचारको अभियोग लागेको हो । बेलायतको इतिहासमा जेल सजाय पाउने उनी सबैभन्दा वृद्ध मानिस भएको बताइएको […]
Posted in: Jiwan saili, mainNews, Rochak
तपाई पनि थाहा पाउनुहोस जाडोमा खजुर खानुका ५ फाइदा
काठमाडौं । जाडोको मौसममा खजुर खानुमा केही फाइदा छ । खजुरमा पोषक तत्वको भण्डार हुन्छ । खजुरमा आइरन, मिनरल, क्याल्सियम, अमिनो एसिड, फस्फोरस र भिटामिन प्रचुरमात्रामा हुन्छ । एक खजुरबाट २३ क्यालोरी शक्ति पाइन्छ । हेर्नुहोस खजुर खानुका ५ फाइदा ः १. खजुरमा रहेको साल्टले हड्डीलाई बलियो काम गर्दछ । यसमा क्याल्सियम, सेलेनियम, म्याग्निज र कपरको […]
जाडोमा स्वस्थ रहन पिउनुहोस यी ५ हट ड्रिंक्स
काठमाडौं । चिसोको समयमा तातो कपडा लगाउनु वा तातो खाएर मात्रै चिसोबाट बच्न सकिन्न, चिसोबाट बच्नका लागि केही हट ड्रिंक्स पिउन जरुरी छ । चिसो भएको दिनमा धेरै क्यालोरी र शक्ति भइको पेय पदार्थ पिउनु आवश्यक छ, जसले धेरै चिसोबाट बचाउँछ र रोगसँग लड्ने तागत समेत प्रदान गर्दछ । त्यस्ता केही हट ड्रिंक्सबारे हामी तपाईलाई […]
Posted in: Jiwan saili, mainNews
चीनले यस्तो खतराका कारण हटायो एक बच्चा नीति
एजेन्सी । २९ अक्टोबरमा चीन सरकारले एक बच्चाको नीति अन्त्य गरेको सबैभन्दा तिव्र प्रतिक्रिया शेयर बजारमा देखिएको थियो । मीड जोनसन न्युट्रिसन जस्ता बच्चाका सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीको शेयर बढ्यो भने लगानीकर्ताले चीनमा अधिक बच्चा जन्मिने आशाका कारण यस्ता कम्पनीमा लगानी गरे । यद्यपि उनीहरुको हातमा निराशा नै हात लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । अब […]